अभिनेता आमिर खानले सञ्चारबाट आफूलाई विच्छेद गराउन मोबाइल बन्द गर्ने घोषणा, किन त !! – News Nepali Dainik
अभिनेता आमिर खानले सञ्चारबाट आफूलाई विच्छेद गराउन मोबाइल बन्द गर्ने घोषणा, किन त !!
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १९, २०७७ समय: १६:२८:५८
*** बलिउडका मिस्टर पर्फेक्टसनिस्टका रुपमा परिचित अभिनेता आमिर खानले सञ्चारबाट आफूलाई विच्छेद गराउन मोबाइल बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
यो निर्णयले आफ्नो काम र व्यक्तिगत जीवनमा ***सजिलो हुने उनको विश्वास छ ।
आमिरका प्रवक्ताले आमिरका साथी अमिन हाजीको फिल्म ‘कोइ जाने ना’को सुटिङका लागि फिल्म ‘लाल सिंह चड्डा’बाट केही समयका लागि ब्रेक लिएको उल्लेख गरेका छन् । फिल्म ‘कोइ जाने** ना’को जयपुरमा छायांकन गरिएको थियो ।
तर फिल्म ‘लाल सिंह चड्डा’का एक सदस्यले भने आमिरले मुम्बई फर्किएर फिल्मको काम शुरु गरिसकेको बताए । यो फिल्मको बाँकी काम सकेर उनी निर्देशक अद्वेत चन्दनका साथ पोस्ट **प्रोडक्सनमा बस्नेछन् । फिल्म यही क्रिसमसमा रिलिज गर्नुपर्ने भएकाले पनि आमिरको व्यस्तता बढ्दो छ ।
यही व्यस्ततालाई मध्यनजर गर्दै आमिरले सोमबारबाट** मोबाइल पूर्ण रुपमा बन्द गरेका छन् ।
‘आमिरले आफूमा मोबाइल चलाउने बानी बढेपछि उनले त्यसको असर निजी जीवन र काममा परेको बुझिसकेका छन्, त्यहीकारण उनी मोबाइल नभएको पुरानो समयको जीवनशैलीलाई** अपनाउन चाहेका छन्,’ भारतीय मिडियाहरूले सूत्रको हवाला दिँदै उल्लेख गरेका छन् ।
आमिरले आफू निकटलाई अत्यावश्यक काममा आफूलाई भेट्नु परे मेनेजर वा कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई भन्न आग्रह गरेका छन् । ‘फिल्म ‘लाल सिंह चड्डा’ रिलिज नहुञ्जेलसम्म उनको सामाजिक** सन्जालको खाता पनि उनको टिमले नै चलाउनेछन्’, भारतीय मिडियाहरूले जनाएका छन् ।
Last Updated on: February 1st, 2021 at 4:28 pm